1-Duruufaha iyo dadka
Duruuftu wax ma baddasho ee dadnimada ayaa wax badasha, tusaala ahaan biyuhu marna waa
kululaadaan marna waa qabow, mar walbana waa biyo, laakin labada xaaladood marka ay kala
yihiin baddalka iyo saamaynta ay yeeshaan waa mid muuqata, sidaas si la mid ah adigana isla
adiga ayaa tahay ee natiijada aad samayso marka xaaladaha ku gad gaddiyaan ayaa macna u
Garashada aan ku garan karo waa inta aad ii ogolaatay oo kaliya maxaa yeelay, waxaad i tustaa
iguna qancisaa ina bartaa inta aad adigu ii ogolaato, taas macnaheeda kama dhigna in aan
aqoon buuxda kuu leeyahay, ma jiro qof garan kara qof kale ilaa in yar mooyee.
Wax walba oo noloshaada ku saabsan waa shaqo qabashadeeda adiga lagaa doonayo, qofna
marti ha uga noqon shaqada noloshaada, sugashada, filashada, iyo isku hallayntaba waa dib u dhaca iyo dibindaabyada noloshaada.
4-Xaalad iyo natiijo
Xaalad walba iyo natiijada ka dhalata ma maamuli kartid laakin waxaad haysataa jaanis aad
mar walba ku maamusho falcelintaada taas ayaana ah natiijada dhabta ah ee saamaynta kaaga
yeelan karto xaaladda timid iyo natiijada ka dhalatay.
5-Farxad iyo kaamilnaan
Kaamilnaan waxaa ka qanaaco badan Farxadda, qof walba wuxuu dooran lahaa Farxadda haddii
lakala dooransiiyo farxadda iyo kaamilnaanta.
Inta badan uu gafkooda kugu bato adigana cafintooda ha kugu badato maxaa yeelay, Qalad waa sixid, Gafna waa cafin.
8-Dad iyo Duunyo
10-Hurdada cabsida leh.
13-Duruufa iyo Dadka
14- Kan xun ficilkiisa